စကစဘက်က သင်ပေးပြီး ပြောခိုင်းထားတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး | D Daily News
Home Local News စကစဘက်က သင်ပေးပြီး ပြောခိုင်းထားတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး
စကစဘက်က သင်ပေးပြီး ပြောခိုင်းထားတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး
မင်းသမီးလုပ်ပါလား သရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်စာအုပ်တို့ကျောင်းဝတ်စုံတို့လည်း မရည်ရွယ်ဘဲ အစဥ်သင့်ရှိနေတယ် ဘယ်ဘက် မှမပါဘူးတဲ့….နားထောင်လို့ကောင်းနေရော ဟိုနေ့က ခရုကောက်ပြီးဆန်ပြုတ်စားရတယ်ပြောပြီး အခု Video မှာတော့ကြက်ကြော် ကိုက်ပြနေတယ်….
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်နေကြ အာဏာလုနေကြတာငါတို့ ပြည်သူတွေက ငတ်နေပြီ ဆိုပြီး Video နဲ့ ဆိုက်ဝါးလွှတ်တဲ့ မိန်းမလည်ပါ….
စကစဘက်က သင်ပေးပြီး ပြောခိုင်းထားတဲ့အကြ မ်း ဖ က်စစ်အုပ်စုက တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်ဖို့များပါတယ်….တချို့တွေ Share ထားတာ တွေ့တယ်။
မအကြနဲ့တော့….ဘယ်ဘက်ပါရမှန်း မသိဖြစ်နေတဲ့ဟိုမရောက် ဒီမရောက်ပြည်သူတွေကိုကြုံးသွင်းနေတဲ့ စကစရဲ့ ဆိုက်ဝါးပါ….
Video တွေ ထပ်လာပါလိမ့်အုံးမယ်လုံးဝ မကြည့်ပါနဲ့ …..ကျော်သွားလိုက်ပါသူ့ဟာသူ ပျောက်သွားလိမ့်မယ်….
မင္းသမီးလုပ္ပါလား သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္းတယ္စာအုပ္တို႔ေက်ာင္းဝတ္စုံတို႔လည္း မရည္႐ြယ္ဘဲ အစဥ္သင့္ရွိေနတယ္ ဘယ္ဘက္မွမပါဘူးတဲ့….နားေထာင္လို႔ေကာင္းေနေရာ ဟိုေန႔က ခ႐ုေကာက္ၿပီးဆန္ျပဳတ္စားရတယ္ေျပာၿပီး အခု Video မွာေတာ့ၾကက္ေၾကာ္ ကိုက္ျပေနတယ္….
ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္တိုက္ေနၾက အာဏာလုေနၾကတာငါတို႔ ျပည္သူေတြက ငတ္ေနၿပီ ဆိုၿပီး Video နဲ႔ ဆိုက္ဝါးလႊတ္တဲ့ မိန္းမလည္ပါ….
စကစဘက္က သင္ေပးၿပီး ေျပာခိုင္းထားတဲ့အၾက မ္ းဖက္စစ္အုပ္စုက တပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္….တခ်ိဳ႕ေတြ Share ထားတာ ေတြ႕တယ္။
မအၾကနဲ႔ေတာ့….ဘယ္ဘက္ပါရမွန္း မသိျဖစ္ေနတဲ့ဟိုမေရာက္ ဒီမေရာက္ျပည္သူေတြကိုႀကဳံးသြင္းေနတဲ့ စကစရဲ႕ ဆိုက္ဝါးပါ….
Video ေတြ ထပ္လာပါလိမ့္အုံးမယ္လုံးဝ မၾကည့္ပါနဲ႔ …..ေက်ာ္သြားလိုက္ပါသူ႔ဟာသူ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္….
Previous articleD-Day ကြေညာပြီး တစ်ပတ်အတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အခြေအနေ
Next articleနိုင်ငံရေးကြောင့်စား၀တ်နေရေးမပြေလည်ကြောင်း ပြောမိလို့ စစ်ခွေးတွေလိုက်ဖမ်းတာခံနေရဲ့မိန်းကလေး